စံပယ်ဖြူတွေတောင်ပွင့်ပြီကွယ်… (မောင်ဂီနောက်လိုက်ခြင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » စံပယ်ဖြူတွေတောင်ပွင့်ပြီကွယ်… (မောင်ဂီနောက်လိုက်ခြင်း)	10
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on May 27, 2015 in Photography | 10 comments
စံပယ်ပန်းတော့ရှာတွေ့ပြီ… အပွင့်တွေက စိတ်တိုင်းကျလောက်အောင်သိပ်မလှဘူး…
Mac ပေါ်မှာကြည့်တဲ့ပုံတွေအရမ်းလှပြီး… PC ပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ အရောင်ပြောင်းသွားတယ်လို့ခံစားရတာ…
PC ပဲမကောင်းတာလား Mac ပဲအရမ်းကောင်းနေတာလားမသိ…
အောင် မိုးသူ says: လှပါအိ။
ခင်ဇော် says: နာလည်း ဖွဘုတ်မှာ မောင်ဂီ နောက် လိုက်ထားတယ်၊
ဒါပေမဲ့ ဒီကလေးရဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ ဝင်စားမှုမှာ ဘယ်သူမှ မမှီဘူး ဆိုတာ တော့ ဝန်ခံရလိမ့်မယ်။
ဒါတောင် တဂျီး ဆိုဒ် က ဓာတ်ပုံ ကွာလတီကို မလျှော့ပစ်ဘူးးး
တောင်ပေါ်သား says: ပန်းဖြူကို ကြိုက်တယ်
kai says: မနေ့ကတင်..အသိတယောက်ပြောတယ်…
အတ်ပဲလူလည်ကျပုံများ.. သူ့အိုင်ပက်..အိုင်ဖုံးနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံတွေ… သူ့ဟာသူထဲကြည့်တော့လွှတ်ကောင်း…နေတာကို… ဓာတ်ပုံလည်းသွားကူးရော..လွှတ်ညံ့သွားဆိုပဲ..။
မှန်ကြီးကြောင့်နေမှာပါ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: မိုးဦးကျ ရိုက်ချင်ရင် တရက်ချိန်းဗျာ..
မက်ခရို သီးသန့် ရိုက်မယ်
ဓါတ်မီး တချောင်း နဲ့
kai says: ဗမာ့ အင်းဆက်နဲ့ပိုးကောင်တွေရိုက်ကြပါလား…။
ငဆင်ဖြူသန်းတို့..။ အာရှကျားကပ်ပါးကောင်တို့ပုံ လိုချင်မိ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: dancing lady ကျိုက်ဒယ်အေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: စပယ် ခေါင်းစဉ်မှာ “စိမ်းသရဖူစိမ်း” ကို အကြိုက်ဆုံးလို့ ပြောရမှာ အားတော့နာပါရဲ့။
အနီးကပ်မို့ အတော်လှတဲ့ ပန်း ကိုရွေးရမလား?
lens ကောင်း ရင် မလှတာကိုလဲ လှအောင် ရိုက်နိုင်လား?
မက်ခရို က နဂိုရှိတဲ့ ဆိုက်ထက် ပိုချဲ့ကားပြီး ပြထား တာ ကို တကယ်တော့ မကြိုက်ဘူး။
lens ကောင်းရင် ပုံကောင်းထွက် ဖို့များမှာဘဲ မဟုတ်လား။ မသိ။
landscape ပုံတွေကို ကြည့်ရတာ ပိုပြီး ကြိုက်တယ်။
အဲဒါတွေ က လွတ်လပ်တယ်။ အသက်ရှူလို့ ဝ တယ် လို့ ခံစားမိလို့။
ကျွန်မ က ဆိုက်ကို ပါမောင်။ (MG= Myanmar Gazette) lol:-))))) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 138
​ဒေါ် လေး says: ကချေသည် နဲ့ တိတ်တခိုး ကိုကြိုက်ပါတယ်
Alinsett @ Maung Thura says: ဒီဂဗာပေါ်မှာ ကျနော် နဲ့ ဓါတ်မတည့်ဆုံးသော ပန်း